28 July 2016 / rpg
​MMORPG တွေနဲ့ Overwatch ပဲ အဆော့များနေလို့ တခြား ဂိမ်းအသစ်တွေတောင် မဆော့ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာသွားခဲ့ပြီ။ Project Setsuna ကို 2015 E3 ကို ​​မျှော်နေတာ မေ့သလိုလိုတောင် ရှိနေပြီ။ ဒီနှစ် E3 2016 မှာ I am Setsuna ဆိုပြီး English version ကို ​ကြေငြာသွားတော့ တော်တော်ပျော်သွားတယ်။ Pre-order မမှီလိုက်ပေမယ့် ထွက်ထွက်ခြင်းနေမှာတော့ ​ဝယ်​ဖြစ်သွားလိုက်တယ်။
​Square Enix နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကြိုက်မိတာ တစ်ခုက Game BGM တွေပဲ၊ ​I am Setsuna ရဲ့ နောက်ခံတီးလုံးတွေက အရမ်း emotional ဆန်လွန်းတယ်။ E3 Trailer မှာကတည်းက အဲ့​တီးလုံးတွေနဲ့ တင် ဂိမ်းကို စိတ်ဝင်စားမိတာပဲ။ နောက်ဆုံးတီးလုံးတင် မဟုတ်ပဲ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ Dialogue တွေကလည်း အရမ်း romance ဆန်လွန်းတယ်လို့ ထင်ရတယ်။ Turn based RPG ဆိုပေမယ့် ဆော့နေကြ ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပဲ unique ဖြစ်တယ်။
အဓိက ဇာတ်ကောင်က Setsuna ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးဆိုပေမယ့် Game စဆော့တာနဲ့ ကိုယ်က မျက်နှာဖုံးစွပ်လူမျိုးစုတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Endir နေရာကနေ စတင်ရမယ်။ ပထမ mission စလုပ်ပြီးတာနဲ့ Setsuna ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို သတ်ဖို့အတွက် mysterious stranger တစ်ယောက်ဆီက ကမ်းလှမ်းတာခံရမယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ Setsuna ကို သတ်ဖို့အတွက် သူမနေထိုင်ရာ Nive Village ဆီကို ထွက်လာခဲ့တယ်ပေါ့။
တကယ်တမ်းကျတော့ Setsuna က sacrifice တစ်ယောက်ပါ။ ဟိုးအရင်ခေတ်ဇာတ်လမ်းတွေထဲက​လို မိစ္ဆာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေရန်က ကင်းဝေးဖို့အတွက် သမီးပျိုလေးကို ကမ်းလှမ်းရတယ်ပေါ့။ အဲ့သဘောပါပဲ။ အဲ့လို စတေးခံတစ်ယောက်ကို ဘာလို့ Endir က သွားသတ်ရတာလဲဆိုတာကတော့ ဆော့ရင်းနဲ့ပဲ သိအောင် လုပ်တာ ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်။
Endir က Setsuna ကို သတ်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မအောင်မြင်ပဲနဲ့ Setsuna ရဲ့ sacrifice အဖြစ်သွားရမယ့် Last Lands ခရီးစဉ်မှာ သူမရဲ့ bodyguard အနေနဲ့မျိုးနဲ့ လိုက်သွားရပါလိမ့်မယ်။ RPG တွေထုံးစံအတိုင်း Setsuna က ကိုယ့် party ထဲကိုပါလာပြီး အတူတူသွားလို့ရတယ်ပေါ့။ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာ တခြား ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့လည်း တွေ့ပြီး ကိုယ့်အဖွဲ့ထဲမှာ playable တွေဖြစ်လာမယ်။ ခရီးစဉ်​တစ်လျှောက် ​ကြုံတွေ့ရမယ့် အခက်အခဲတွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ဆော့မယ်ဆိုရင် အဓိက အကြံပေးချင်တာက Save ဖို့ပါ။ Save Point location တွေရှိသလို World Map ပေါ်မှာလဲ ကြိုက်တဲ့ အချိန် save လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဖွဲ့ထဲမှာ လူ​တွေအများကြီးရှိပေမယ့်လည်း တကယ်တမ်း battle ​တွေမှာကျတော့ အဲ့ထဲကမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သုံးယောက်နဲ့ ဆော့ရလို့ပဲ။ အကယ်လို့ အဲ့သုံးယောက်လုံး သေသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံး Saved ထားခဲ့တဲ့ နေရာကနေ ပြန်ဆော့ရပါလိမ့်မယ်။ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ first time player တွေအတွက် ခက်တဲ့ boss တွေရှိတယ်။ ​သူတို့ကို နိုင်ဖို့ဆိုရင် မြို့တွေကို ရောက်တဲ့အခါ ဝယ်လို့ရသမျှ weapon တွေကို ဝယ်ပြီး ဆင်ဖို့ပဲ။ In-Game currency ကို နှမျှောနေရင် ​boss fight တွေမှာ အရမ်းခက်ပြီး ဂိမ်းကိုပါ စိတ်ကုန်သွားနိုင်လို့ပါ။
​ဇာတ်လမ်းအတိုင်းဆော့သွားမယ်ဆိုရင် နာရီအနည်းငယ်အတွင်း ပြီးနိုင်ပေမယ့် တခြား side stories တွေကိုလည်း လုပ်စေချင်တယ်။ ဒါမှလည်း RPG ဂိမ်းတွေရဲ့ အရသာက ပို​ဆော့လို့ကောင်းမှာပေါ့။ ဂိမ်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကြိုက်မိတာ နောက်တစ်ခုက Visual Novel တွေလိုမျိုးပဲ Choice တွေရွေးရတာပါ။ ဘယ်ဟာရွေးရွေး ဇာတ်လမ်းက ပြောင်းမသွားပေမယ့် ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ Response ကတော့ ပြောင်းသွားမှာပါ။ အရမ်းကြီး ကိုယ်မှား​ရွေးလို့ ဆိုးဝါးသွားမှာကိုတော့ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
ဆော့ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ PS4 နဲ့ PC မှာဆိုရင် Steam က​နေဝယ်ဆော့လို့ရပါတယ်။ Store links တွေကိုတော့ official website မှာပဲ ကြည့်လိုက်ပါတော့။
How many days already since Karazhan dungeon was released!? I really love Blizzard for bringing it back. It brings back lots of memories. Okay, enough intro. Let's talk about Nightbane. He is a